Ogaden News Agency (ONA) – Jabhada ADM oo Lagusoo Dhaweeyay Gobolka Axmaarada.
Jabhada ADM oo Lagusoo Dhaweeyay Gobolka Axmaarada.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ee woqooyiga Itoobiya ayaa sheegaya in maalinimadii shalay siwayn loogu soo dhaweeyay Gobolka xubno kasocday Ururka Amhara Democratic Movnment (ADM).
Jabhada ADM oo ahayd jabhad hubaysan oo ku kacsanayd taliskii hore ee wayaanaha ayaa wadahadal lagashay maamulka cusub ee Abiye Axmed uu hogaaminayo, kuwaas oo kubaaqay in jabhadaha hubaysan ay si nabad ah xaqooda kuraadsadaan.
Madax kasocotay Jabhada ADM ayaa siwayn loogu soodhaweeyay magaalooyinka Bahardar iyo Gonder, halkaas oo mudo tobanaan sano ah ay dibad joog ka ahaayeen.
Xubnaha ADM ee Gobolka Axmaarada gaadhay ayaa kasoo kicitimay wadanka Eritrea, halkaas oo ay kulahaayeen saldhigyo ciidan xafiisyana uga furaayeen, waxayna Jabhadu go’aansatay in ay ciidankeeda kuxarayso gudaha wadankii halkaas oo dib udajin lagu samayn doono xeryana looga furay.
Jabahada ADM oo aan dagaalo waawayn lagalin ciidamada Itoobiya ayaa kujiray abaabul iyo isdiyaarin, waxayna Jabhadu dibada ubaxday kadib markii taliskii hore ee wayaanuhu uu shacabka Axmaarada ugaystay gadaafooyin waawayn.
Xubnaha Jabhada ee gaadhay Gobolka Axmaarada ayaa lagu wadaa in ay soogaadhaan magaalada Addis Ababa, halkaas oo ay kula hadli doonaan shacabka kasoo jeeda Gobolka Axmaarada iyo siyaasiyiin waawayn oo maamulka Abiye katirsan.